DAAWO: Dawladda Puntland oo ku dhawaaqday dagaal toos ah ‘’SL heshiis waxaan ku nahay Xabad & Dagaal’’. – Puntlandtimes
DAAWO: Dawladda Puntland oo ku dhawaaqday dagaal toos ah ‘’SL heshiis waxaan ku nahay Xabad & Dagaal’’.
GAROOWE(P-TIMES) – Guddiga Difaaca ee dawladda Puntland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay dagaal toos ah, waxayna sheegeen in ay ku heshiiyeen Somaliland in dagaal lays kaga saaro gobalka Sool, waxaana ay ka hadleen arrimihii maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
Hadii bilad lagu bixin lahaa hanjabaada iyo qayladda PL gacmahaan u taagay. Sow nimanka wax ka hadal badani majiraan. Waxaan umalynayaa Somalia waxay nafta isugu keeneen waa dhegihii bay ka barjeeyeen KKK. Waxay I xasuusisaa beri aan qurbaha joogay baa marka ninka karabiyanka aad is qabsataan intaan la’is gelin buu marba dhan uboodaa oo qayliyaa si uu kuu cabsi geliyo. Ilayn Somaali is ma yaqaanaane wuxuu un arkaa isagoo feedh haleelay KKK PL waa sidii un!
Wlaale waa runta cidani boote maahine wax kale meesha kuma hayaan runtana waxay thy dhulbahante ayaa dagaal diyaar u ahayn sabaabtoo ah maanta dhulbahante magaaladiisii oi dhisantay ma burburinaayo majeerteenow garoowe ayaa bur buraysa anaku doonimayni inaanu maatidanada wax gaaraaan iidoorna anagaa wadana gumaysi iyo aargoosi aad naga aargoosataan walaanay dhacayne cadaawada majeetteeen madoonayo inaan maanta wax noqdo Cadawga dhulbahate waa Majeertee khaasatan reerka la dhoho maxamuud saleebaaan
qaska hooyadaa ee qurmuun u sheeg kan darwiish la baxayoow waan ku fahanay iidoor laangaab ah ayaa tahay wxba dhulbahante ha iska dhigin maalinba magac la bax gun yahay
Habarbaa iska howhowlehe heelada inoo tuma Somaliland afka kama hadasho ee gacan bay ka hadashaa yaa xoolo dhabayaco
bakhbakhda pukhland hayska socoto illeen ciidanka jam. Somaliland waxaas ma dhegeystaane waxay idiinla diyaaryihiin dhirbaaxadii aad uga barateen